Umfazi XLR Chassis Connector, XLR Audio Jack Isinxibelelanisi-Lianzhan
Zhejiang Lianzhan Electronics Co., Ltd. Yasekwa ngonyaka ka-2008, ngobungcali ngokukodwa mveliso kunye nokuthumela ngaphandle 1/4 ″ Jacks mfono, Jacks Audio, XLR izihlanganisi, XLR Audio Combo Jack, SpeakOn isinxibelelanisi, Powercon isinxibelelanisi kunye RCA Jack njl ikakhulu wakhonza kwi imihlaba yeeMixers, Isandi seConsole, iiGuitar Amplifiers, iVidiyo yeVidiyo kunye nokuKhanya kweSiteji okunxulumene noko.
Izihlanganisi zeXLR zihlala zisetyenziswa kwizicelo zeaudiyo ezinje ngezitudiyo kunye nendawo yeqonga, kunye nokusetyenziswa kokukhanyisa nokulawula oomatshini. Olu hlobo lwesinxibelelanisi luthandwa kakhulu. Kungenxa yokuba ukufaneleka kwabo ekuhambiseni imakrofoni elungelelanisiweyo kunye neempawu zenqanaba lomgca ngaphandle kokulahleka komgangatho kwimigama emide yekhebula.
I-XLR yomsindo weCombo Jack
XLR / jack isinxibelelanisi esihlanganisiweyo esidibanisa i-XLR Socket kunye ne-1/4 "jack. Olu luhlu lutsha lweziseko zivumela i-XLR 1/4" uqhagamshelo lweJack kwiqokobhe elinye le-XLR. Babandakanya izibiyeli zentsimbi ezinemisonto ye-M3 ngaphambili kunye nokutshixa ngasemva, ukubonelela ngonxibelelwano olomeleleyo lomatshini phakathi kwebhodi kunye ne-chassis.
I-SpeakOn ligama elinophawu lwentengiso lwesinxibelelanisi sombane, esenziwe kuqala yiNeutrik. Izihlanganisi zentambo ze-speakON zezona zihlanganisi ziqhelekileyo kumzi mveliso wokudibanisa isikhulisi / isandisi-lizwi. Lonke usapho lwezihlanganisi zentambo ezi-2, 4 no-8 ziyilelwe ukuba zisebenze kwindawo yangoku ephezulu, yokufaka umthwalo kwimowudi yesandisi-lizwi.
XLR Male 3 Pin Chassis iPhaneli Mount Jacks Audio ...
XLR Male Chassis Isinxibelelanisi 3-Pin XLR Panel Moun ...
I-Neutrik XLR 3-Pin yePaneli yeChassis yeNtloko yeNtaba ...
I-XL yeFreyimu yeJack engu-3 ye-Pin ye-Mount D Ubungakanani ...
uyilo lwamva nje
I-Angle Pin XLR Isidibanisi seChassis esiDibanisa i-5 Pin Cann ...
I-Neutrik 5 yePole yoLwamkelo lwaBesilisa lweNtaba ye-Audi ...
Push XLR isinxibelelanisi 5 Pole Ibhinqa Receptacle Cha ...
I-XLR 5 Pin Isithethi seAudio yeSithethi iJack Socket Chas ...
Iimveliso eziphambili zeLianzhan zibandakanya i-XLR Chassis Connector, XLR Combo Jack Connector, SpeakOn Connector kunye nePowerCon Connector. Ukusetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zeVidiyo eziVakalayo, iMakrofoni, uSomlomo, Isandisi-lizwi kunye nesandisi-lizwi njl.